Akụkọ - Understandghọta nnu nnu na-agba nchara nnwale
Ingghọta Nnu Nza raygha Corrosion
Nrụrụ aka bụ mbibi ma ọ bụ mmebi nke ihe ma ọ bụ ihe onwunwe ha kpatara gburugburu ebe obibi.
1. Imirikiti corrosion na-apụta n'ihi ihe pụrụ iche dị na gburugburu ebe obibi. Ihe mejupụtara ikuku ahụ nwere ihe ndị na-emebi emebi na ihe na-emebi emebi dị ka oxygen, iru mmiri, mgbanwe okpomọkụ na mmetọ.
Usoro nnwale nnu na-eme ka nnu na-arụ ọrụ dị iche iche. Mgba nnu a kpọtụrụ aha ebe a na-ezo aka na mbara igwe emere chloride. Ihe na-emebi emebi bụ nnu chloride dị ka nke dị na sodium chloride, nke na-abịa site n'oké osimiri na mpaghara saline-alkali dị n'ime.
Ihe nchara nke na-eme na elu igwe ahụ bụ nsonaazụ nke electrochemical dị n'etiti ion chloride dị na oyi akwa oxide na mbara igwe na akwa nchekwa na metal dị n'ime. N'otu oge ahụ, ion ion chloride nwere ụfọdụ ume ume, nke nwere ike ịmịkọrọ ngwa ngwa site na pores na cracks na elu igwe iji gbanye na / ma ọ bụ dochie ikuku oxygen na akwa chlorinated, na-atụgharị oxides na-enweghị ike ịbanye n'ime chlorides soluble. na-agbanwe passivated elu banye n'ọrụ. Ebumnuche nke ule a bụ ịghọta ogologo oge ngwaahịa ahụ n'onwe ya nwere ike iguzogide mmeghachi omume ndị a na-adịghị mma n'oge ojiji niile.
2. Nnu ịgba corrosion ule na ya ezigbo-ụwa ngwa
Nnwale nnu na-agba agba bụ ule gburugburu ebe obibi nke na-ejikarị arụ ọrụ gburugburu ebe obibi arụ ọrụ iji chọpụta mmebi nke ngwaahịa ma ọ bụ ihe igwe.
E kee ya ụzọ abụọ; otu bụ eke gburugburu ebe obibi ule, na ndị ọzọ bụ accelerated simulated nnu ịgba gburugburu ebe obibi ule. Ihe nyocha a na-etinye nnu na-eme ka nnu na-eji nnu mee ihe iji chọpụta ikike ngwaahịa a iji gbochie mmebi.
E jiri ya tụnyere ihe ndị a na-ahụkarị na gburugburu ebe obibi, mkpokọta chloride nke ịgba nnu nwere ike ịdị ọtụtụ ma ọ bụ okpukpu abụọ. Nke a na-eme ka ọnụego corrosion dịkwuo elu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na a nwalere ngwaahịa ngwaahịa na gburugburu ebe obibi, ọ nwere ike were otu afọ iji mebie, ebe a na-emepụta ihe nwere ike ịpụta ụdị mmetụta ahụ naanị na awa 24.
Ihe nyocha a na-eme ka nnu na-agba ume na-agụnye nnu na-anọpụ iche, nnu nnu na-eme ka nnu na-egbu egbu, na-eme ka nnu nnu na-eme ka nnu na-agba ume, na nnwale nnu na-agbanwe.
A. Na-anọpụ iche nnu ịgba ule (NSS ule) bụ otu n'ime ihe ndị kasị ochie ụzọ maka accelerated corrosion ule na-arụ widest ngwa ubi. Ọ na-eji 5% sodium chloride nnu mmiri ọgwụ, na pH uru gbanwere na-anọpụ iche iche (6-7). Ọnwale ule ahụ bụ 35 ℃, na ọnụego sedimentation nke nnu nnu ga-adị n'etiti 1 ～ 2ml / 80cm².h.
B. A na-emepe ule acetic acid nnu (ASS test) dabere na nnwale nnu na-anọpụ iche. Ọ na-agbakwụnye ụfọdụ acetic acid glacial na 5% sodium chloride ngwọta iji belata pH uru nke ihe ngwọta banyere 3. Na-eme otú ahụ ihe ngwọta na-aghọ acidic, na nnu foogu nke guzobere tụgharịa si na-anọpụ iche nnu foogu na acid. Ya corrosion ọnụego bụ banyere 3 ugboro ngwa ngwa karịa ndị NSS ule.
C. Nnu ọla kọpa na-eme ka ule acetic acid mee nke ọma (ule CASS) bụ ule nnu na-eme ngwa ngwa iji mepụta esenidụt. Ọnwale ule bụ 50 ℃. A na-etinye obere ọla kọpa nnu, ọla kọpa chloride na ihe nnu nnu iji mee ka corrosion mebie. Ya corrosion ọnụego bụ mkpokọta 8 ugboro nke NSS ule.
D. Uzo a na-etinye nnu nnu ozo bu nyocha nyocha nke nnu. Ọ mejupụtara ule na-anọpụ iche na-agba agba n'ime ụlọ nnwale nnu na-etinye nnu na nnu tinyere ule na-ekpo mmiri mgbe niile. A na-ejikarị ya eme ihe maka ngwaahịa-ụdị ngwaahịa zuru oke. N'ihi mmiri mmiri e kere eke n'oge ule ahụ niile, nnu nnu na-enwe ike ịbanye n'ime elu nke ngwaahịa ahụ. Ebumnuche nke ịgbanye gburugburu ebe nnwale abụọ ahụ (nnu nnu na mmiri ọkụ) bụ iji melite izi ezi nke otu nwere ike ikpe ikpe eletriki na akụrụngwa nke ngwaahịa ọ bụla.
Nnwale ịgba mmiri nnu anyị dabere na ụkpụrụ GJB548B, usoro 1009, yana ihe ndị bụ isi bụ: ntinye nke nnu nnu ga-abụ 0,5% ~ 3.0% (pasent site na ịdị arọ) nke mmiri deionized ma ọ bụ mmiri a na-agbanye. Nnu e ji mee ihe ga-abụ sodium chloride. Mgbe ị na-atụle na (35 ± 3) ℃, pH uru nke nnu nnu ga-adị n'etiti 6.5 na 7.2. Naanị kemịkalụ hydrochloric dị ọcha ma ọ bụ sodium hydroxide (dilute solution) nwere ike iji dozie pH. Iji mee ka usoro corrosion na-eme ngwa ngwa nke gburugburu mmiri, ogologo oge iguzogide ya na-ekpebi ikike ya iguzogide nrụrụ.
Na mmepe nke ihe ngwugwu ihe ndi mejuputara, nyocha nke ime mgbanwe gburugburu ebe obibi aburula nke oma na nke oma. Ngwunye nnu na-eme ka nnu sie ike bụ usoro bụ isi maka ịtụle nguzogide gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa. Ya mere, imeziwanye ihe na-emebi emebi nke nkwakọ ngwaahịa aghọwo akụkụ dị mkpa nke usoro mmepụta. Site na nyocha teknụzụ, ụlọ ọrụ anyị na-agba mbọ idozi esemokwu nke corrosion site na usoro nke ọgwụgwọ okpomọkụ, usoro akara akwa dị elu, usoro electroplating na ụzọ ndị ọzọ nke ịhazi ihe ndị e ji ígwè rụọ. Zọ a anyị nwere ike n'ụzọ dị irè melite mkpokọta corrosion eguzogide nke metal ngwugwu na izute mkpa nke ndị ahịa 'ojiji maka ụdị ndị a nke ngwaahịa.